Nepal Samacharpatra « News of Nepal
Author: Nepal Samacharpatra
गण्डकी प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्रीले संबोधन गर्ने, कांग्रेसले अवरोध गर्ने
नेपाल समाचारपत्र, पोखरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार गण्डकी प्रदेशको संसद बैठकमा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । पोखरा विश्वविद्यालयको सिनेटर बैठक र संसदमा पनि सम्बोधन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री पोखरा
तिन महिनामा ८ बालविवाह बदर
सिर्जना पन्त, बागलुङ । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाले पछिल्लो ३ महिनामा ८ वटा बालविवाह बदर छ । ०७५ बैशाख महिनाबाट बालविवाह रोक्न अभियाननै सञ्चालन गरेको गाउँपालिकाले तिन महिनामा ८ वटा बालविवाह
सरकारलाई कांग्रेसको कडा चेतावनी, डा. केसीको माग सम्बोधन नभए संसद चल्नै नदिने
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउन खोजे संसद चल्नै नदिने निर्णय गरेको छ । सरकारविरुद्ध विरोध प्रर्दशन लगायत
जापानमा गर्मीका कारण ६ जनाको मृत्यु र हजारौँ मानिस अस्पताल भर्ना
राजबिन थापा जापान । बढ्दो तापक्रमको कारण जापानको जनजीवनमा निक्कै प्रभाव परेको छ । जापानका केहि छेत्रहरुमा यस वर्षकै सबै भन्दा धेरै तापक्रम देखिएको छ । मौसम विज्ञान एजेन्सीले बताए
विमल विष्ट, डोटी । डोटीको बिपिनगरमा रहेको ईलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक नृपबहादुर बोहरालाई काठ चोरीको आरोप लागेको छ । प्रहरी प्रमुख नै काठ चोरीमा संलग्न भएको भन्दै स्थानियबासीले
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको नेपाली कांग्रेसले बुधबार बिहान पदाधिकारीहरुको बैठक आवहन गरेको छ । बूढानीलकण्ठस्थित सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बोलाइएको बैठकमा सरकारविरुद्ध घोषित आन्दोलन र समसामयिक
सानीभेरी रुकुमको पहिलो पुर्ण खोप सुनिश्चित गाउँपाललिका
धनवीर दाहाल, रुकुम पश्चिम । रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाँउपालिका जिल्लाकै पहिलो पूर्ण खोप सुनिश्चित गाउँपालिका घोषणा भएको छ । नेपाललाई पूर्ण खोप सुनिश्चित देश बनाउने राष्ट्रिय लक्ष अनुसार सानीभेरी गाउँपालिकालाई
करेन्ट लागेर घाईते भएका नारायणका लागि रकम संकलन गरिँदै
विमल विष्ट, डोटी । डोटीमा बिद्युतको पोल गाड्ने समयमा करेन्ट लागेर घाईते भएका आर्दश गाउपालिका १ चासीका नारायण खड्काको उपचारका लागि डोटीमा आर्थिक संकलन अभियान सञ्चालन गरिएको छ । होटेल
हाटबजार ब्यवस्थापन कार्यक्रम शुरु
सरोज यादव, विराटनगर, विराटनगरका सडकमा साप्ताहिकरुपमा लाग्दै आएको हाटबजारलाई व्यवस्थित बनाउने अभियानको शुरुवात वार्ड नं ४ वाट शुरु गरिएको छ । कञ्चनबारी पश्चिम नोवेल हस्पिटल जाने सडकमा शुक्रवार हाट लाग्दै
करणी गर्दा गर्दै समातिए ४ जना बलात्कारी
गाईघाट, उदयपुर, एक महिलालाई राति सिरहाको लहान बजारबाट अपहरण गरी गाडीमा लग्दै बलात्कार गर्ने चारजनालाई प्रहरीले त्रियुगा नगरपालिकाको लालपताबाट रंगेहात पक्राउ गरेको छ । स्कार्पियो गाडीबाट गएराति ११ बजे समातिएका
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको बस्ने भनिएको आकास्मिक बैठक मंगलबार ८ बजेका लागि सारिएको छ । बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने बताइएको छ ।
काठमाडौँ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सचिवालय (स्थायी समिति) बैठकले अनशनरत डा गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि माग गरेको छ । उक्त बैठकले डा केसीका जायज माग तुरुन्त पूरा गर्न सरकारसँग
भिरबाट लडेर वृद्धको मृत्यु
दुनै, डोल्पा, डोल्पामा एक वृद्धको भिरबाट लडेर मृत्यु भएको छ । कैलाली जिल्ला बर्दिया नगरपालिका– ३ घर भएर डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका– ८ मा मादलको व्यपार व्यवसाय गर्दै आउनुभएका ५५ वर्षीय
काठमाडौँ, एक्काइसौँ संस्करणको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आइतबार राति सम्पन्न भएको छ । फाइनल खेलमा फ्रान्सले क्रोएसियालाई ४–२ गोलअन्तरले पराजित गर्दै उपाधि चुम्यो । फ्रान्सले दोस्रो पटक विश्वकपको उपाधि जितेको हो
डुबानबाट भक्तपुरमा ११ करोड भन्दा बढिको क्षति
पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर । भक्तपुरमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण ११ करोड ९३ लाख ५० हजार १२५ रुपैया बराबरको क्षति भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले
शुरु हुने वित्तिकै संसदको दोस्रो बैठक पनि अवरुद्ध
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. गोविन्द केसीको अनशनको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले दोस्रो संसद बैठक पनि अवरुद्ध गरेको छ । विपक्षी सांसदहरुको अवरोधका
अपाङ्गता भएका १४ जनालाई सहायता सामग्री वितरण
विमल विष्ट, डोटी । डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका १४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहायता सामग्री वितरण गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई दैनिक जीवनयापन गर्नमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले
चितवन, पवित्र तीर्थस्थल देवघाटमा विद्युतीय शव दाहस्थल निर्माण गरिने भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१ देवघाटस्थित नारायणी नदी किनारमा शव दाहस्थल निर्माण गर्न लागिएको हो । शहरी विकास मन्त्रालयले विनियोजन गरेको
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौँ । सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नीलकण्ठ उप्रेतीलाई सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीलाई भारतका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गरेको